၂၀၁၈ အတွက်ကားရောင်းချမယ့်ပမာဏနဲ့ ကားထုတ်လုပ်မယ့်အရေအတွက်ကို အစီအစဉ်ချခဲ့တဲ့TMC! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ အတွက်ကားရောင်းချမယ့်ပမာဏနဲ့ ကားထုတ်လုပ်မယ့်အရေအတွက်ကို အစီအစဉ်ချခဲ့တဲ့TMC!
Toyota Motor Corporation (TMC) ဟာ ၂၀၁၈ အတွက် ရောင်းချမယ့်ကားအရေအတွက်နဲ့ ထုတ်လုပ်မယ့်ကားအရေအတွက်အစီအစဉ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလက ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပဲ Toyota ရဲ့လက်အောက်က company တွေဖြစ်တဲ့ Daihatsu Motor Co., Ltd. and Hino Motors, Ltd., အစရှိတဲ့ company တွေအတွက်လည်း Sale အပိုင်းနဲ့ production အပိုင်း အတွက် အစီအစဉ်တွေကို တစ်ခါတည်းကြေညာခဲ့တာပါ၊ ၂၀၁၈ အတွက်အစီအစဉ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Sale နဲ့ Production အပိုင်း ကိုအစီအစဉ်ကို ဒီနှစ်မှစတင်ကြေညာတာမဟုတ်ပဲအရင်နှစ်တွေထဲက ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ၂၀၁၇ မှာ ချခဲ့တဲ့ Toyota ရဲ့ Plan ကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၇ နဲ့ ၂၀၁၈ plan တွေကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ၁ နှစ်တာအတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ TMC ရဲ့ယုံကြည်မှု ကိုတိုင်းတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ Toyota ရဲ့ Sale, Production ပိုင်းက အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မှာလား၊ ဖြစ်လာမှာလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စွားစွာစောင့်ကြည့်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။